भावनात्मक निबन्ध – मझेरी डट कम
by neruta moktan
by bishwas lama
May 11, 2013 April 4, 2021
काम भनेको सबै नै गहारो हुन्छ । कुनै काममा मानसिक तनाव ज्यादा हुन्छ त कुनैमा शारीरिक कष्ट बढी तर हुन त सबैमा केही न केही गारो त हुन्छ नै । तर सबैलाई अप्ठ्यारा र समस्या आफ्ना जटिल लाग्छन भने सुबिधा र रम्झम अर्कैको धेरै लाग्छ ।
Read More »यसकारण केयरगिभरको काम सबभन्दा कठिन हुन्छ
आज केही लेख्ने मुड चलेको छ तिम्रो बहानामा। तर सुरु कहाँबाट गरौँ! यति लामो बिछोडपछि पनि म केही लेख्नै सक्दिन तिम्रा लागि । किन थाहा छ? किनकि समयको पर्वाह नगरी, भौगोलिक दूरीको हरहिसाब नगरी तिमी हरदम मैमा छौ र म तिमीमा लपेटिएको हुन्छु । यो अटुट स्नेहको लहरोमा जेलिएपछि केही लेख्नै नसकिने रहेछ । तिमीलाई थाहै छ कुन बाध्यता र विवशताको मारमा परी म आजभन्दा ६ वर्ष पहिले तिमीलाई नाघेर ठुलो जहाजमा बसेर अपरिचित गन्तब्यतर्फ उडेको थिएँ । तिमीलाई छोड्दा आफ्नो दुधे बालक, मायालु पति र ब्रिद्दा आमालाई पनि त्यतै कतै छोडिराखेर यता बत्तीएको थिएँ । आजै जस्तो लाग्छ डाँकै छोडेर प्लेनभित्र पसेको, हेर्दाहेर्दै घर छुट्यो, परिवार छुट्यो, तिमी मेरो धरती छुट्यौ र लामो उडानसँगै तिमीमाथिको मेरो आकाश छुट्यो । तर पनि मैले त्यसबेला यतिधेरै गुनासो गरिन । तिमीलाई त केही भन्दै भनिन । आज यतिका पछि तिमीलाई नै भनेर केही शब्द जुटाउनुको कारण केही गुनासा र केही वाचा कसमका कुराहरू छन् जो आजै नभनी भएको छैन ।
February 13, 2013 March 10, 2021
जीवनबाट नै प्रेमको सिर्जना हुन्छ । जब एउटा नविन जीवनको सुरुवात हुन्छ, तब प्रेमको सिर्जना हुन्छ । सृष्ट्रिकाल देखी नै प्रेमको सुरुवात भएको पाईन्छ । प्रेम भावनात्मक रुपमा दुई आत्मा बिच हुने गर्दछ । प्रेम जीवनको मार्गदर्शन हो जहाँ दुई आत्माको सम्बन्ध प्रगाढ रहनछ । तर वर्तमान समयमा प्रेमलाई फेशनका रपमा लिईन्छ । जसरी बजारमा दिनप्रतिदिन नयाँ डिजाईनको चलन चल्छ, त्यस्तै दुई चार दिनको अन्तराल पछि प्रेमको स्वरुप बदलिन थाल्छ र कस्ले धेरै प्रेमी वा प्रेमिका बनाउन सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । आजकाल प्रेमभावनासँग नभएर अनुहारको सुन्दरतासँग गर्ने गरेको पाईन्छ । कामवासना र क्षणिक स्वार्थपूर्तीका लागि मात्र प्रेमको नाटक रचेको देखिन्छ । यति मात्र हेन पहिलो पल्ट कुनै नौलो केटा वा केटीसँग भेट्दाको नजर जुधाईलाई नै प्रेम मानिन्छ ।
म देख्दछु- एक वृक्षऊपर, डालीमा कुँक्दै छ – कोकिल । एक भाषा बोल्दछ उसले, महाकविको भाषा-“जो लेखिन्न, बोलिन्न, बुझाईन्न” । त्यो भाषा प्रेमको भाषा !
चैत्रको एक हूरी – झक्झोर भएका ती वृक्षका पत्रहरू- गुमनाम डगर, बेघर भई डुलिरहेछन बिचरा ! दम्भित पवनको त्यो उग्र झोंकाले छिया-छिया भएकी बिचरा त्यो वृक्षलता ! सान्त्वनाको गीत गाउदैं छ – कुहु-कुहु त्यो कोकिल । प्रेमको त्यो अनौंठो रूप, सरल भाषा साथी ।